Hevitra MPANOHARIANA | Ankapobeny | 11
Endrikendreho Daholo Ary e!
2014-06-23 @ 22:15 in Ankapobeny
Misy ny tranga manafintohina indraindray ary ny tena koa fantatra fa mba manana hambo ihany ka manala baraka tanteraka izany hoe ho antsoina na hotadiavin'ny polisy ny tranonao hanaovana fanadihadiana anao izany. Toy izao manaraka izao ny fandehan'ny tantara : nisy fivoriana (lanonana) tsotsotra sambany mba nandehanana tamin'ny faran'ny herinandro teo satria noheverina fa mahaliana ny zavatra atao any. Misy zavatra maromaro any : tafatafa na fanoroan-kevitra, fampilalaovana sy fampandihizana ny ankizy, fifanolorana fanomezana, tsakitsaky, fanalana hetaheta... Vita izany rehetra izany dia lasa nody izahay. Izaho moa mbola nisy asa natao ka nanatitra sy naka an-dramatoa ihany no tena natao.
Vita ny sakafo atoandro dia nisy niantso, nilaza fa nisy fakantsary avolenta iray very ka mety ho tonga aty aminay ny polisy hanao fanadihadiana anay. Talanjona tanteraka tamin'ilay toe-javatra fa tena tezitra kosa satria mba sambany tonga ianao no misy toe-javatra tahaka izany no mitsena anao. Tezitra satria tsy miafina fa dia ao anatin'ny ahiahiana izany izahay matoa nandefasana izany teny izany tamin'ny antso. Nisy olona iray fantatro nanatrika tao ihany koa ka nisy fomba nahazoako niantso azy nanontany azy ny amin'ity vaovao ity. Gaga izy raha nilazako ilay izy ary namaly fa tsy naharay antso kosa hatrmin'io ora niantsoako azy io. Tsy fantatra moa izay fomba nataon'ilay tompon'ny fakantsary sady anisan'ny mpikarakara satria raha misy laharana ilay izy dia laharana faramparany ny anay, sa ny laharana farany ve no nantsoina voalohany? raha araka ny laharana izany dia tokony ho voalohandohany izahay na faramparany. Raha araka ny olona ahiahiana sy tsy ahiahiana indray dia mazava izany fa ao anatin'ny ahiahiana izahay. Ny fomba iahiahiana ny anay moa tsy mazava nefa ny hafa tsy nantsoina.
Ny zavatra mahasosotra iray faharoa dia ny fifikirany fa ao amin'ny mpikambana no naka ilay fakantsary fa tsy nisy filazana nataony mihitsy kosa hoe ary raha mba amin'ny mpiara-miasa aminy itodihana voalohany rehefa hiahiahy ihany. Mahasosotra miaraka amin'izany dia ny fomba famalin'ireo mpikambana sasany izay tsy tonga tao milaza hoe ampanantsoina daholo izay rehetra tonga tao hohadihadiana. Raiso amin'ny toeranao ary hoe tonga tao ianao dia ampanantsoina na tongavan'ny polisy any an-tranonao na tadiavina any amin'ny fokontany ny misy ny tranonao. Ny olona ve mahalala izay tena marina fa dia halaza ao amin'ny fokontany iray manontolo ianao hoe tonga ao aminao ny polisy hanao famotorana anao. Dia eritrereto sahady ny fahafaham-baraka mihatra aminao. Mariho avy hatrany fa tsy maintsy misy fihavanana simba sahady eo na nangalatra ilay olona na tsia.
Raha sanatria tonga tokoa ary ny fampiantsoana sy ny karazany, dia raha olona telopolo, ohatra, no ahiahiana sy nampanantsoina, nefa iray na roa no nangalatra. Hanao ahoana moa ny ho fihetsiky ny 29 na 28 ambiny? Misento fa afa-doza? afa-doza amin'inona anefa satria tsy nanao heloka izy? Raha izaho manokana ny ao an-tsaiko dia hoe ity ramatoa ity izany efa niahiahy na nieritreritra ahy ho nangalatra ny fakantsariny, izany hoe eritreretiny fa mpangalatra aho izany ka ny hangalatra no nidirako tamin'io fikambanana io. Tsy ho tonga amin'ny fivoriana manaraka ve aho sa tsy maintsy ho tonga nefa tsy maintsy hilaza ny alaheloko kosa hoe fanimbazimbana ahy kosa ny hieritreretanao ahy ho mpangalatra. Sa ny hametraka fitoriana ho setrim-pitoriana hoe nanao fanalam-baraka ahy? Raha ianao: Ahoana ny hevitrao?
Jentilisa, 24 jona 2014
Lakolosy sy Trondro (Ary lakile)
2014-05-07 @ 09:56 in Ankapobeny
Tsy hiresaka lakile intsony indray aloha fa efa miova zavatra hafa indray izao ny malaza eto amin'ny tanàna, niainga tamin'ny tolona famerenana ny ara-dalàna tamin'ny 2009 iny resaka iny no lasa hira milaza tantaram-pitiavana manambara fa izy no tompon-toerana. Noho ny vanim-potoana sy lazan'ny lakile anefa dia nambarany fa izy no tompon'ny lakile.
Niainga sy nifandraindraika tamin'izany ihany koa ny resaka lakolosy, nifanakaiky fihaino amin'ny voambolana lakile ihany koa ny lakolosy, fa ilazana kosa fa izy no prezidan'ny antenimiera mijoro. Ilay filohan'ny antenimiera, toa mampihevitra hatrany fa izy no tompon'ny fanaovan-dalàna... na tompon'ny lalàna. Toa miharo fanesoana ihany koa anefa ilay tompon'ny lakolosy satria vehivavy no nolaniana ho filohany, toa entina milaza fa lakolosy hafa no tokony lalaoviny fa tsy iny lakolosy maneno ao Tsimbazaza iny. Ankehitriny moa nisy iny fanonganana ny biraon'ny Antenimiera amin'ny fomba ankolaka iny ka misy ny te-handraikitra ny ezaka "lakolosy" fanairana. Ny lakolosy moa mitabataba, ary te-hitabataba amin'ny tsy rariny mahazo azy ilay artista malaza amin'ny tapolaka. Tsy mba izaho aloha no nihira ity hira satira politika manaraka ity an! Revolisionan'ny mpitabataba?
Fa misy revolisiona tsy re tsaika, efa nahazo tsikera tamin'ilay fitiavana hanaisotra ny sary lohan'omby eo amin'ny sary fanevan'Antananarivo, efa nahazo esoeso hoe hosoloina lakroa angaha sa hosoloina osy (ho fanesoana an-dRavalomanana sy tiana ilazàna fa raha Ravalomanana no Ben'ny tanàna dia hosoloiny osy io, toa finiavana handisoana ny tantara fa efa nandalo ny maha-Ben'ny Tanànan'Antananarivo ihany koa io olona io fa tsy nanova inona tsy akory izy!). Ny antsafa nifanaovana tamin'ny PDS Ny Hasina Andriamanjato tao amin'ny tvplus no nahafahany nilaza fa tsy sarina lohan'omby (zébu) misy trafony no nataon'ny mpanjanatany tamin'ny 1950, izany hoe telo taona taorian'ny 1947) fa lohan'omby "taureau" vazaha tsy misy trafony mitandroka an'Antananarivo. Ny endrika tandroka tamin'ny voalohany tokoa dia mitady ho efajoro fa tsy boribory tanteraka araka ny fahita amin'ny omby eto Madagasikara.
Somary nangina moa iny resaka iny fa nahasarika ny saina ihany ny nahita ireo ara-vy (zavakanto vita amin'ny vy) miendrika trondro manemitra ny dobo manatrika ny lapan'ny tanàna. Ny tsikaritra mametraka fa amin'ny lafiny avaratry ny dobo, izany hoe manelanelana azy amin'ny lapa ihany no namenoana iray ara-vy miendrika trondro ireo. Inona tokoa moa no tokony hisy ao amin'ny dobo fa tsy ny trondro, na ny hazandrano? (tsy voatery ho trondro ihany) Misoko mangina ihany ny tolon'ingahy PDS raha izay no tarafina, fa raha izaho manokana ihany koa moa dia ny "fleur de lys" (lisy moa ny anarany amin'ny teny malagasy?) no tiako esorina amin'io fanevan'Antananarivo io, raha tsy hoe raikitra indray ny adihevitra manao hoe: "inona no anaovan'ny skoto ireny "fleur de lys" amin'ny fanamiany ireny?" Manohy ny tolona ingahy PDS mametraka ireo sary trondro ireo ary tsy mbola nahare fanoherana aloha aho hatreto, tolona ara-saimbolika (sariohatra hoy ny dika ao amin'ny baiboly protestanta nahitsy farany) fa sady tokony hitoetra amin'ny dobo ny trondro no marika famantarana kristiana hafa ihany koa.
Dia miverina amin'ny lakolosy indray aho, raha jerena ihany koa manko io lakolosy, vita amin'ny metaly, io dia mitovitovy endrika ihany koa amin'ny vovo entina manihika trondro. Toa kisendrasendra hafahafa fa rehefa nametraka ara-vy trondro ny PDS dia te-hamelona ny ezaka "lakolosy" endrika ara-vin'ny vovo entina manihika trondro kosa i Rossy sy izay mety hiara-dia aminy. Eritreritra sendra mandalo, saingy tsy laitra ny tena fa manoratra rehefa mahita endrika saimbolika (sariohatra) tahaka itony. Miala tsiny raha tsy misy azonao izay lazaiko fa raiso ho rediredy fotsiny ihany fa manahirana ity fiainana ity.
7 mey 2014
Fetin'ny Mpiasa: Inona no niova? Inona no nivoatra?
2014-05-01 @ 11:17 in Ankapobeny
Efa mihoatra ny zato taona izao ny tolona nataon'ny mpiasa tany Chicago, Etazonia, nitolona ho amin'ny fiasana adiny valo isan'andro. Nitolona tamin'ny fanararaotan'ny mpampiasa toa manao danin'ny kibony, mametraka ny mpiasa ho andevo maoderina. Efa nisy manko ny fotoana tsy anavahana na ampy taona na tsia ny mpiasa any amin'ny orinasa lehibe tamin'izany taonjato izany. Niasa nihoatra ny 60 ora isan-kerinandro, enina andro amin'ny fito, amin'ny karama $1.5 isan'andro ny mpiasa nifindra monina tao amin'io tanàna iray any Illinois io. Tamin'ny alalan'ny famoriana ny mpiasa, rehefa nahavita asa, izany hoe amin'ny alina, matetika ny endrika fihetsiketsehana tamin'izany fotoana izany.
Tsy nipetra-potsiny koa anefa ny mpampiasa fa namaly tamin'ny alalan'ny fandroahana ireo olona mavitrika tamin'ny fananganana endrika sendikà tamin'izany fotoana izany, nametraka lisitra mainty ireo mpikamban'ny sendikà, nandroaka mpiasa faobe, manakarama mpandrava fitokonana sy mpitsikilo mpiasa na jiolahimboto mbamin'ny "tafika" tsy miankina amin'ny fanjakana, ary nampiasa ihany koa ny fampiadiana ara-piaviana ireo mpiasa tany Etazonia ireo. Niaro ny tombontsoan'ny fandraharahana ihany koa gazety be mpamaky tamin'izany fotoana izany ka tsy maintsy namelively ny sendika sy ny gazetin'ny mpifindra monina izay tena iharan'ny tsindrihazolena.
Andro niavaka tamin'ny tolon'ny sendikà ny andron'ny 3 mey 1886 sy ny ampitsony, noho ny fifampidarohana teo amin'ireo mpiasa mitaky ny adiny valo isan'andro, sy ireo mpandrava tolona, ka niafara tamin'ny fitifiran'ny polisy ny mpiasa tamin'ny andro voalohany, dia nisy ny antso faobe hanaovana fivoriana teo amin'ny kianja Haymarket ny ampitso. Tamin'ny andron'ny 4 mey 1886 io dia mbola nisy ihany ny korontana noho ny fisian'ny baomba nipoaka sy ny fiampangana niafara tamin'ny fanamelohana ho faty ireo mpitarika ny fihetsiketsehana fito izay anarsista avokoa. Ho antsika rehetra tsy mahalala, noho izany, dia nanana maritiora fito ho amin'ny tolona hiasana adiny valo ny anarsista ka aza atao mahagaga ny mahita isaky ny voalohany volana mey ireo anarsista mifanandrina amin'ny polisy hatrany isan-taona any amin'ireny firenen-dehibe ireny.
Ankehitriny manao ahoana?
Amin'ny ankapobeny efa saika voahaja any amin'ny firenena maro ny ora fiasana adiny valo, saingy mbola mitohy ny tolona sy ny fampivoarana tokony tanterahina. Tsy hiresaka ny fiandohan'ity andro ity aho fa hitodika eto Antananarivo manokana, ary Madagasikara sy ny firenena andalam-pandrosoana amin'ny ankapobeny. Fahatsapana no ahafahana milaza fa toa natao hiveloman'olona iray ny karama raisin'ny maro amin'ny mpiasa ary ampirisihana ry zareo hanao "suppl" raha tiana ny hahazo vola bebe kokoa, io no fomba iray andikana ny ora fiasana adiny valo isan'andro fa mba tsolorana vola kelikely ihany nefa amin'ilay mety hanintona ny mpiasa hiasa mihoatra ny ora feran'ny lalàna. Mahavariana ihany anefa fa mbola mihamaro hatrany ny mpiasa, fa efa mihavitsy kokoa ny zanaky ny mpiasa. Tsikaritra ihany koa fa tahaka ny heverin'ny mpampiasa fa efa manana trano tsy hofaina ny mpiasa, nefa ny mpiasa tsy manana fahafaha-manao hananana izany trano manokana izany. Maro dia maro ny mpiasa no mbola miara-monina amin'ny ray aman-dreniny sy ny mpiray tampo aminy, na dia efa manambady aman-janaka sy manana asa aza. Misy zavatra tsy mitombona ao anatin'izany toe-javatra izany, ary mbola mametraka hatrany fa karazany zary fitazonan'aina fotsiny ny karama fa tsy mahatakatra ho amin'ny fampivoarana mahaolona. Mba te-hahalala aho hoe firy isan-jaton'ny mpiasa malagasy, tsy miankina amin'ny fanjakana indrindra indrindra, moa no afa-manofa na mipetraka amin'ny tranony manokana?
Tsy resaka ora fiasana mihoatra amin'ny fomba ankolaka, na karama ihany no itoeran'ny olana, eo anivon'ny mpiasa, fa eo ihany koa ny fitadiavana ampiasana ny mpiasa any amin'ny lasitra tsy tokony anirahan'ny mpampiasa azy. Efa maro ny mpiasa amin'ny teratany vahiny sasantsasany nandrenesana fa mpanamarim-bola no ao anaty taratasy fifanarahan'asa nefa irahina mankany an-trano hanary ny tavimandry sy hamafa ny trano fidiovana, na hanasa ny atin'akanjon'ny mpampiasa sy ny ankohonany. Tsy ferana ihany koa anefa fa mety misy ihany koa ny Malagasy mety hanao izany fihetsika manivaiva ny mpiasa ao aminy izany. Ny mpiasa ihany koa moa eo anatrehan'izany matin-kaninkely ka aleony manao ilay asa tsy tokony ho anjarany toy izay voaroaka amin'ny asany fa aiza indray moa no hamelomana ny ankohonana raha sanatria voaroaka. Andraikitry ny roa tonta ihany noho izany raha mbola iharan'izao toe-javatra izao ihany ny mpiasa satria tsy mahajoro amin'ny tokony ho asa tanterahiny fa manao na misalovana ny tokony ho asan'ny hafa.
Manana anjara toerana lehibe ihany koa anefa ny fanjakana amin'ny alalan'ireo mpanaramaso ny asa (inspecteur de travail). Tsaroako hatrany ny fotoana nahadelege ahy (folo taona mahery be izay) ka mba saika hakako hevitra amin'ireny solontenan'ny fanjakana amin'ny sehatry ny asa ireny saingy avonavona sy mpanompokelin'ny mpampiasa no toetra nasehon'ireny tamiko. Vao nanomboka namelabelatra sy toetry ny asa aho dia namerina fanontaniana aloha izy: "Aiza tsara ianao moa no miasa?" Rehefa namaly aho ka henony fa orinasa manana ny lazany eto amin'ny firenena ilay izy dia ny azy amin'izay no nataony be : Ianareo ary mahavoa be sy tsara vintana tafiditra amin'ireny asa ireny fa jereo ireo tsy an'asa maro hitanao mihaohao ireo. Tsy aleo ve mihafy amin'izay efa azonareo fa tsy hikaroka izay tsy ho azonareo na oviana na oviana. Tankina aho ary tena vinitra tokoa tao anatiko tao raha nandre ny valintenin'ilay ranamana. Tsy nohenoiny fa tena kely anie ny karamanay nefa izahay tsy afaka ny hanao zavatra hafa ahafahanay miavotena, tsy tadidiko loatra intsony moa izay tena notadiavina fa mety ho karazana endrika tsy fanarahan-dalàna miampy fanararaotam-pahefana ihany ilay izy. Amin'izao fotoana izao moa dia tsy hita sy re intsony izay hetsika ataon'ny sendikà fa dia hoe andro tsy iasana fotsiny no fantatry ny mpiasa amin'izao fotoana.
Jentilisa 1 mey 2014
«Mialoha 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38 39 40 Manaraka»